अर्थ मन्त्रालय : “बिशेष जिम्मेवारीका साथ उनको काँधमा !” - Demo Khabar
डा. खतिवडालाई बिशेष जिम्मेवारी
अर्थ मन्त्रालय : “बिशेष जिम्मेवारीका साथ उनको काँधमा !”
काठमाडौं, भदौ । निबर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखी अर्थ मन्त्रालय हेर्ने जिम्मेवारी दिन भएका छन । आर्थिक क्षेत्रमा निकै अनुभव सम्हालेका बिज्ञ डा. खतिवडाले अर्थमन्त्रीका रुपमा रहेर जिम्मेवारी सम्हाल्दा राम्रो ‘परफरमानेन्स’ देखाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थतन्त्रको जिम्मा उनलाई नै दिने भएका हुन ।
देश कोराना महमारीको संकटमा रहँदा पनि अर्थतन्त्रलाई निकै राम्रो तरिकाले ब्यवस्थापन गरेर आर्थिक संकटतर्फ जानबाट रोक्न सफल अर्थमन्त्रीका रुपमा पहिचान बनाएका डा. खतिवडाले अर्थतन्त्रलाई गति दिनसक्ने विश्वासका साथ अर्थमन्त्रालयको जिम्मा आफैमा राखेर कामको जिम्मा उनलाई दिने भएका हुन ।
अर्थ मन्त्रालयमा संभवत ः राज्यमन्त्री मात्रै राख्ने अनि मन्त्रीचाहि आफैमा राखेर सबै काम डा. खतिवडाले नै हेर्ने गरी जिम्मा दिइने बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ । बिज्ञ एवं कुशल ब्यतित्व रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि ‘ईकोनोमिक डिलिङ’ गर्नसक्ने क्षमता राख्नसक्ने ब्यत्तित्वका रुपमा पनि डा. खतिवडा नै रहेको बुझाई प्रधानमन्त्री ओलीको रहेकाले अर्थतन्त्रलाई सवल बनाउन उनको बिद्दता उपयोग गरिने बालुवाटार स्रोतले बताएको छ ।
कोरोना संक्रमणले देशको अर्थतन्त्र शिथिल भएका बेला देशभित्र सन्तुलित ब्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा ‘कन्भिङसिङ डिलिङ’ गर्नसक्ने क्षमता राख्ने ब्यत्तित्व डा. खतिवडा नै रहेको बुझाई प्रधानमन्त्री ओलीको रहेको र त्यसलाइं तरण दिनसक्ने ब्यत्ति पनि उनी सक्षम रहेको ठम्याई छ ।
बालुवाटार स्रोत भन्छ, ‘अरु भएको ढिकुटी सक्न चाहिँ माहिर छन । यिनले चाहिँ ल्याउँछन पनि ।’ प्रधानमन्त्रीको चाहना अर्थतन्त्रलाई ‘तरण’ दिने हो । प्रधामन्न्त्रीको तयारी भनेको अर्थमन्त्रालय आफै राख्ने, सल्लाहकारको रुपमा डा. खतिवडालाई राखेर हेर्ने जिम्मेवारी दिइएको डेमोखबरलाई जानकारी दिए ।
यो पनि हेर्नुहोला
डा. खतिवडाले पदमा रहँदा ‘अर्थतन्त्रका लागि निकै महत्वपूर्ण योगदान दिएको र यस्तो जटिल परिस्थितिमा पनि अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक हुन दिनुभएन ।
बुधवार, भाद्र ३१ २०७७०४:१४:२८